Royal National Hotel, oo ku yaal London | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Guryaha, London
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Yurub iyo adduunka oo dhan waa London, sidaa darteed hudheelka la siiyaa runtii waa tiro badan yahay oo waa kala duwan yahay. Laakiin marka ay sidan tahay, qofka socotada ah ee mararka qaarkood waxaa inta badan ku dhaca su'aal: halkee ayaan ballansadaa? Huteelkee wanaagsan oo aan qaali ahayn? Halkan waxaa ku yaal seddex xiddig huteel oo ku yaal London, the Hotel Royal Qaranka London.
Waa hudheel gaar ah, farxad leh oo xiriir aad u wanaagsan la leh garoonka diyaaradaha Heathrow. Ku dar bar, kafateeriya iyo xitaa meel ku takhasusay biisaska. Ka waran?
1 Hotelka Qaranka ee Royal
2 Maxaad ku arkaysaa hudheelka agtiisa
Hotelka Qaranka ee Royal
Huteelkan ayaa ah saddex xiddigood waana mid ka mid ah xaafadaha dhexe ee caasimada Ingriiska. Waxaa la furay 1967 waxayna ku shaqeysaa dhisme toddobo dabaq ah oo u eg qaabka Shiinaha, inkasta oo ay ku habboon tahay waqtiyada casriga ah waxaa dib loo soo celiyay 2005 gebi ahaanba.
Waxay ku taalaa wadada Bedford Way, qiyaastii 25 daqiiqo oo lug ah ayey ka timaadaa Bloomsbury, baabuurna waxay ku qaadataa 20 si loo aado Victoria Park Waxay ku xigtaa saldhigga tubbada tubbada ee Tottenham Court Road. Wax xun ma jiraan. Sidoo kale waxay 500 mitir u jirtaa Matxafka Ingiriiska iyo 350 mitir oo keliya Jaamacadda London, tusaale ahaan.
Ku saabsan iyaga faa'iidooyinka aasaasiga ah waxay na siisaa a dukaan kafeega, dukaanka raaxada, iyo dukaan hadiyadeed, timo jare, Internet bilaash ah, Internetka WiFi, meel baabuur dhigasho la bixiyo iyo qolalka aan sigaar cabbin. Akhrinta wax yar ka badan waxaan ogaaday in sida England oo kale aysan joogin maalmo aad u kulul aysan jirin qaboojiye qolka jiifka, in kasta oo ay jiraan meelaha la wadaago. Dhowr sano ka hor waxaa jiray mowjado kuleyl ah oo saaxiibkiis uu ku dhacay dhaqankan, laakiin haye, inaad ka baxdo bartamaha xagaaga mooyaane kuleylka waad ka baxsan doontaa ...
Marka la eego qolalka, waxaa jira qolal aasaasi ah oo leh laba sariirood oo labalaab ah ama sariir laba-jibaar ah, oo leh Wifi, barxad, fadhi, musqul wadaag iyo minibar; iyo qolal aasaasi ah oo leh laba sariirood oo loogu talo galay hal adeeg, Waxa kale oo jira qolal saddex-laab ah. Qolalka oo dhami waxay leeyihiin kuleyliyaha dhexe, telefishanka iyo microwave oven, shaaha iyo kafeega tas-hiilaadka lagu sameeyo iyo minibar. Dabcan, haddii aadan jeclayn inaad la wadaagto musqusha, isku day inaad xusuusato taas markaad ballansaneyso.
Royal National Hotel London wuxuu bixiyaa a Quraacda Qaaradaha: badarka, miraha, rootiyada, rootiga, kafeega, shaaha, laakiin waxaad mar walba bixin kartaa lacag dheeraad ah oo aad ku raaxeysan kartaa wax caadi ah Quraac Ingiriis ah taas oo ka dhameystiran uguna gaar. Ka feker ukunta la jeexjeexay, boqoshaada, sausage-ka dhiiga, yaanyada ama digirta dubta ... Adiguna wax badan ma bixinaysid maxaa yeelay hadaad tagto maqaaxi ku taal wadada qiimaheeda shaki la’aan inuu sarreeyo.
Waxay sidoo kale leedahay meel ka baxsan meesha wax lagu cuno oo aad ku cuni karto, baarar iyo maqaayad inta badan laga cunteeyo cuntada Shiinaha. Waxay kaloo leedahay barkad lagu dabaasho, sauna, jacuzzi, qolka jimicsiga iyo solarium. Soo dhaweynta waxay shaqeysaa 24 saacadood, waxaa jira xarumo lagu raro kursiga curyaamiinta oo haddii aad ka mid tahay kuwa la socda xayawaanka rabaayadda ah, illaa iyo inta aadan ku sameynayn eey aad u weyn wax dhibaato ah ma jiraan.
Haddii kale tan hudheelka miisaaniyadda ee London Waxay bixisaa asal ahaan waxa hudheel kasta oo kale bixiya: nadiifinta qalalan, kirada kumbuyuutarka, sarrifka lacagaha, xarunta ganacsiga iyo adeegga qolka. Soo galiddu waa laga bilaabo 2-da galabnimo illaa 12-ka habeennimo, iyo hubi waa 11-ka subaxnimo.
Ma xiiseyneysaa qiimahaRaadinta ikhtiyaarrada waxaan soo galay taariikho usbuuca soo socda iyo shan habeen qolka laba jibaaran oo quraac lagu daray waxay leedahay qiimo ah 594 euro laba qof oo waaweyn. Iyada oo leh laba sariirood oo qura iyo quraac ah qiimaha wuxuu ku kacayaa 732 euro iyo adeeg barka guddiga (had iyo jeer laba qof, shan habeen), 871 euro. Qolka seddexaad wuxuu ku kacayaa 997 euro.
Hoteelka ayaa aqbalaya Mastercard, Visa iyo PayPal oo ah qaab lacag bixin ah. Fikradaha? Hagaag, wax walba ayaa jira. Ha filanin wax yaab leh, laga yaabee xoogaa su'aalo ah nadiifinta ama raaxaysiga barkimooyinka, laakiin waxaan horeyba u ognahay sida tani tahay, waxaan dhammaanteen ka wada hadlaynaa sida aan ku qabanno carwada ...
Maxaad ku arkaysaa hudheelka agtiisa
Sidaan kor ku sheegnay Hoteelka ayaa leh goob aad u wanaagsan maxaa yeelay waa ficil ahaan Bartamaha London. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu fiican waxa ay bixiso. Haddii aadan raadineynin wax badan oo raaxo ah ama hudheel qurxoon oo qurux badan laakiin wax shaqeeya oo si fiican u yaal, markaa tani waa ikhtiyaar aad u fiican.
Waad lugeyn kartaa ama raaci kartaa gaadiidka dadweynaha waxaadna aadi kartaa meesha aad rabto. Waxay aad ugu dhowdahay Matxafka Ingiriiska, mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka isla markaana leh mid ka mid ah uruurinta ugu wanaagsan, gaar ahaan xagga Qadiimiga Masar, laakiin waxay leedahay waxyaabo ka yimaada Griiga, Rome, Bariga Dhexe ama Ameerika. Uruurintooda runtii waa wax cajiib ah. Ujeeddadu waa in maalin dhan loo hibeeyo booqashada, sidaas darteed isu dhowaanshuhu waa labalaab.
Waad ka faa'iideysan kartaa xaqiiqda ah in hudheelku u dhow yahay iyo inay jiraan hageyaal Isbaanish ah. Matxafku wuxuu furmayaa 10-ka subaxnimo wuxuuna xirmayaa 5:30 pm, sidaa darteed waxay noqon kartaa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee la arko. Dhinaca kale waa Oxford Street, mid ka mid ah wadooyinka ugu xiisaha iyo ganacsiga badan England, oo leh boqolaal dukaan oo ay weheliyaan 200 mitir laga bilaabo Marble Arch ilaa Oxford Circus. Markii aad lugaynaysid, ka fikir in asalkiisu uu yahay waddo Roomaan ah oo ay ahaan jirtay mid ka mid ah meelaha laga soo galo magaalada qadiimiga ah ee London.
Waa halkan, wadada Oxford Street, halkaas oo dukaamada ugu caansan ay yihiin sida Uniqlo, H&M, Benetton, Zara, Adidas, Mango ama Topshop, kaliya in la xuso qaar ka mid ah noocyada caalamiga ah. Topshop waxaa ku yaal 800 oo mitir murabac oo super super ah halkan, tusaale ahaan.
Sidaad u aragto, hudheelkani waa sahlan yahay: hoyga sedexda xidig oo qaali ah oo faa iidadiisa ugu weyn ay tahay meesha. Haddii aadan aad uga xanaaqsaneyn hudheelada ama miisaaniyaddaadu ay kugu qasbeyso inaad wax ka beddel ku sameyso, meeshan waa u qalantaa meesha ay cajiibka tahay awgeed, Bedford Way - Russell Square.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » London » Royal National Hotel, London
Sida loo doorto wakaaladda socdaalka